IiBlogs malunga nokuVumba kweNkukhu kunye nokuTyiwa kweCrusher-Victor Pellet Mill
Ukwenza iipellets zeentlanzi, Uninzi lwabantu luya kukhetha ukuntywila okutya okuneentlanzi. Njengoko intlanzi itya iipellets emanzini, akukho lula ukuba kutyiwe ngeentlanzi. Ngeli xesha, inokuwunciphisa umoya p …… ...
Ngomhla kaMatshi ,Oomatshini beVICTOR pellet banike umgca wokuvelisa ukutya kwenkukhu kumthengi waseAfrika,efumaneka eMozambique.it's ikakhulu ukuvelisa ipelet yokutya kwenkukhu kunye nepelle feed yenkomo …… ...
Izithako zokutya kwenja ziyahluka kuxhomekeka kuhlobo lokutya kwezilwanyana zasekhaya. Umahluko osisiseko phakathi kokutya okwenziwe ngamathumba kunye nokomileyo wesilwanyana sisixa sokufuma. Ukutya okucwangcisiweyo kuqulethe phakathi 70 kwaye 80% ukufuma …… ...
Iipellets zokutya kweenkukhu zenziwa ngezinto ezahlukeneyo ,Ukudityaniswa kwezixhobo ezahlukileyo zokupheka kunokuhlangabezana neemfuno zeenkukhu zezondlo ezahlukeneyo. Ukutya okuluhlaza kusetyenziswa ikakhulu ukongeza i-vitam …… ...
Amafama e-Catfish eNegeria okwangoku axabana ngokunyuka kweendleko zokutya, elekelele iindleko zeemveliso kwilizwe liphela. Abanye babalimi bathe kunganyanzeleka ukuba baphinde baqwalasele eyabo …… ...
Xa sisithi iinkukhu kunye nokutya kwemfuyo, ayithethi kuphela inkukhu okanye ihagu. Unokwenza ukutya kwabanye njengeTurkey, idada, amarhanisi, inkomo njl. Elona xabiso libalaseleyo kwimveliso yeenkukhu ibhasi …… ...
Ngokonyuka okuqhubekayo kwezilwanyana zasekhaya,izilwanyana ezininzi zineemfuno ezahlukileyo zokutya kwezilwanyana zasekhaya.Abathandi abaninzi bezilwanyana bevumba ukutya kwazo ngaphambi kokuba bakhethe ukutya kwezilwanyana zasekhaya..
Abanye abalimi beenkukhu baqhele ukondla iinkukhu ngeenkozo eziluhlaza ezifana nombona, Millet, isisu, njl. Oku akupheleli nje ekunciphiseni ukusetyenziswa kokutya kodwa kukwenzakalisa iinkukhu.kuza kubangela ukutya okuninzi …… ...
galela isando se-gram yesando
Kwinkqubo yokuphanda ukutya unokufumana inani lezithako ezifuna indlela ethile yokwenza. Ezi zithako zokutya zibandakanya ukutya okuziinkozo okuziinkozo, umbona ofuna ukunciphisa ubungakanani bamasuntswana …… ...